Trout - inhlanzi kungokwalabo umndeni salmon. Ngaphezu kwalokho, it is a omele ejwayelekile. Kukhona zenyathi eziningi le nhlanzi, futhi ngayinye kuwo inezici ayo ehlukile. Ngokwesibonelo, ezinye izinto singadluli 2 kg isisindo, isisindo esisele ufinyelelwe ngezindlela ezingaphezu kuka-20.
Trout lokudla okumnandi kakhulu futhi ecebile izakhi yezimbiwa inyama. Ngakho-ke, mayelana amaphupho akhe abadobi abaningi. Kwezinye izindawo kuba Russia - lokudoba. Okuncane lokucuketfwe fat, imali ejwayelekile kilojoule amagremu 100 isisindo, kanye digestibility kakhulu - konke lokhu izinzuzo main of izinhlanzi.
Izimo zethu zihluke kakhulu ezivamile iyona trout izinhlanzi. Izithombe abadobi kanye indondo okuhambisanayo kuvamile impela, kokubili ezizimele kanye ezithangamini ezehlukene namawebhusayithi ezikhethekile. Ngakho ungeke ukutshela kafushane mayelana yayo ndawo.
abameleli Anadromous nasemanzini agelezayo ngokuvamile atholakala imicengezi imifula emikhulu ngamanzi ezifanele. trout iCaspian ukhetha yoLwandle iCaspian, njengoba kubonakala igama layo. Futhi ngesikhathi lapho uthunyelwa ziyozalela, kungase jikisa angenasawoti. kokuzalela isizini senzeka eMfuleni Kura. Enye omele - salmon, uhlala le Azov futhi Black iziLwandle. Ngakho, Anglers eziningi izindawo lapho ungakwazi ukubamba impango.
Njengoba kushiwo, i-lolwehlukanisa zonke zibe ulwandle noma echibini izinhlanzi okuqondene lezi zilwane. Ihlala eqinisweni lokuthi Kumzha, eqinisweni, kungakhathaliseki ukuthi hlobo luni amanzi: usawoti noma fresh. Kungaba noma ikuphi. Lokhu kuba nomphumela omuhle ukusabalalisa kwayo abantu abaningi.
abameleli Uhlobo omkhaya salmon kuzohluka kuncike zenyathi. zezinhlobo Iningi ejwayelekile, ezifana trout Taimyrskaya, ukuxhumana noma amanzi ahlanzekile, izici esingokwemvelo kuchaziwe ngezansi.
Roth, pokoshenny phansi.
Uma ngezinga elikhulu ikakhulukazi ke umhlathi ongezansi has a hook ehlukile.
A fin elincane ngemuva.
Small fin adipose.
Amachashaza wonke umzimba.
Sea nechibi izinhlanzi efanayo ngokubukeka, ekwakhekeni nasekumeni komzimba ngisho ukunambitheka. Umehluko kuphela endaweni yokuhlala, okuyinto zingashintsha uma bebona kunesidingo.
Uma kuqhathaniswa isisindo izimo futhi ziyahlukahluka. I kunazo zonke iCaspian izinhlanzi trout. Photo ku niche sites wethula abadobi kanye izimo 10 no-20 kg. Ngokuvamile, isisindo ukukhiqizwa kulindeleke kungaba azimisele kusukela yazo. Uma ichibi lincane, nobukhulu kuyoba encane, futhi okuphambene nalokho.
Trout - inhlanzi, okuyinto ukhetha zidala izindawo amachibi enjalo lapho engajulile futhi kukhona eziningi amatshe. Lokhu kungenxa yokuthi amaqanda amancane ezifihlwe ngaphansi kwabo gqiba ngokwabo esihlabathini, uma inkulu.
Isici esiphawulekayo trout wukuthi ngenkathi zidala kuqhubeka ukudla. Ngemva ukukhulula isilinganiso 7-12 ayizinkulungwane. Amaqanda, inhlanzi buthule wahlanganyela ukudoba isikhuphashe, inhlanzi nokunye.
Linganisa Fry mayelana 5-6 mm ububanzi. Iya eziyizimbangela insikazi akukwazi izikhathi ezingaphezu kuka-10 ekuphileni kwabo. Izingane Okokuqala lihlale endaweni lapho zidala iphutha. Ngemva kokuhluma, baya emva kwabantu abadala olwandle noma echibini.
Trout - izinhlanzi ukuthi bangaphila iminyaka 19-20. Feedthrough kanye zasolwandle singeqi emifushane wokuphila, ngokungafani echibini. Nokho, ngalesi sikhathi kwanele bedoba, kungenzeka ukujabulela abadala inyama, ngaphandle kokuphazamisa ukuzala.
Kukholakala ukuthi zonke izinhlanzi umndeni salmon (uhlu abameleli likhulu kakhulu) kanti ngokwemvelo bangabantu eziyingozi. Abantu abaningi ngesikhathi uhlinza ukubona umdlavuza elincane esiswini. Kukhona nezinye izinhlanzi. Ngokuvamile, i-trout musa fixate ukudla okudlayo, ulungele yidlani konke kuza ngendlela yakhe.
Kodwa zikhona ezinye izibonelo. I Lake Ohrid has abameleli ababili zohlobo. Okokuqala, trout, ifinyelela isisindo 10 kg, futhi kunikwe amandla kuphela imikhiqizo inyama. Eyesibili ikhophi - inhlanzi encane esiliva. Ukudla kwalo siqukethe ezinamagobolondo kuphela ne-plankton. Beginners kanye nayizimfundamakhwela ngokuvamile siwathathe amalungu emikhaya ahlukene. Futhi ambalwa ukubonakala kungashiwo ukuthi basonta olulodwa.
Trout ichitha isikhathi esiningi sokuphila kwabo amanzi anosawoti. Spawn ke aphinde abhukude abuyele e angenasawoti emifuleni. Kukhona futhi gazinga zikhule. Lapho esekhulile, wabuyela olwandle noma echibini ngamanzi anosawoti.
Amaqiniso ethakazelisayo inhlanzi
Njengoba kushiwo, ummeleli kunazo zonke kwezingu-iCaspian kuyinto trout ulwandle. Emlandweni icala eqoshiwe, lapho Angler babamba isisindo 51 kg. Kodwa namuhla abantu enkulu etholakalayo njengoba trout yonke indawo evamile, ukudoba khona. Ngakho-ke, kuvele akanayo isikhathi sikhule enjalo osayizi enkulu.
Kwezinye izimo, ukuxhumana, ulwandle kanye echibini izinhlanzi olungabubangela ndawonye. Lokhu kwenzeka lapho iseduze nomunye kukhona ichibi ezimbili abafanele zixhunywe emfuleni. Bobabili basukele kanyekanye ngempela ngokuthula ukuya inqubo zidala, futhi akekho ozizwa ukungakhululeki.
Kuze kube manje, ukudoba trout iba ngaphansi inzuzo, njengoba lalinjalo ekuqaleni kwekhulu lama-20. Lokhu kungenxa yokuthi ukudoba akuyona okunengqondo, kanti kwezinye izindawo endaweni yawo baqala Hydro. Ngakho-ke ukukhula yemvelo abantu kwakusekungazini iphazamiseke. Kodwa izinhlanzi Namanje abavikelwe futhi okungavikelwe izakhiwo ezifanele.
Zonke izinhlanzi umndeni salmon (uhlu liqala ngala trout evamile futhi iphela iCaspian trout brown) ubanjwe on ukuphotha noma fly ukudoba, uma spawns. Zidala senzeka esikhathini kusukela ngo-September kuya ku-February, kuye ngokuthi izimo zezulu we ndawo.
Trout ukuluma kusukela abukhali, futhi kufanele ungaluqhuzuli ngokushesha. Iqiniso ukuthi zingephulwa kalula, okuholela umdobi ilahlekelwa indondo yakhe. Okokuqala, udinga sikhathele elincinyane ngakho. Khona-ke lapho beaching awunankinga.
Zonke ukudoba kungaba yinto enzima, wabanjwa ulwandle noma echibini izinhlanzi. Izithombe zabantu nge Trophies olufanele afakazela lokho. Bona kungabonwa abadobi abakhathele kakhulu. Ngakho-ke, isidingo ukuthatha okuningi ukudla okunomsoco, futhi line ukudoba, ngoba ngaphandle trout mpi ngeke give up.
Kubhekwe uhlobo salmon ukunambitheka kanye izimfanelo Culinary neze kunabayeni kuya inyama yezilwane. Ngaphezu kwalokho, lapho ziphekwe ngendlela efanele, kungcono ngisho. Okokuqala kuyinto, ukuthi inyama kugaywe kalula, ngisho nezingane ezincane.
Trout - hhayi izinhlanzi oily, kodwa ibuthaka. Lokhu kungenxa yokuthi ku isidumbu saso inyama has ungqimba amafutha. Kodwa ukuthi akuphi Ukuboshelwa, ngakho Kwezinye izingxenye isilwane ingalungiswa ngandlela kuphela, kuyilapho abanye basikisela ilungelo fantasies Culinary. Futhi, inani amafutha kuncike esikhathini ukudoba, e zidala, isib, inhlanzi uthola amafutha bese kuba ohlabayo ngasekupheleni kwaso.
Ukuze ukulungiselela uju, apheke trout kancane prisalivaem. Ngenxa fat umzimba elicwile juice yabo. Ngenxa yalokho, it okwenzayo ukuze uthole ukunambitheka, okungasekelwe iphazanyiswe neminye imikhiqizo kusukela marinade.
Ebilisiwe okuphekiwe on skewers Fish Ubuye izimfanelo ezinhle Culinary. Ngesikhathi esifanayo awusebenzi alahlekelwa bubuhle yayo futhi, ngokungafani nabanye abaningi. Kodwa inkinga itholakala lokuthi ukuthi okwesikhathi inyama obucayi nesiyingqayizivele kunzima kakhulu ukukhetha dish side. Ngokuvamile kuba nendima eyadlalwa amakhowe abilisiwe noma wabhaka amazambane.
Naphezu kweqiniso lokuthi zikhona impela eningi ulwazi kanjani ukubamba lokhu omele salmon, trout - inhlanzi, lapho kudinga indlela ekhethekile. abalandeli Engalindelekile noma Cubs uzokwazi ukubhekana nakho, uma kuphela yisikhohliso. Kodwa uma prilovchilis nokudoba, khona-ke ungakwazi ukujabulisa umndeni nge inyama enhle kakhulu ukunambitheka esiyingqayizivele.
Kuyinto engenakwenzeka hhayi ukuziqhakambisa iwusizo trout. Ngokungafani izinhlobo eziningi izinhlanzi kwezohwebo, kuba okunamafutha kancane, has inyama ithenda. Ngenxa yalesi futhi siyijabulele.